Ohulumeni banxuse ukuthi bagxile 'kubahambi abasengozini enkulu' hhayi 'emazweni asengozini enkulu'
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Ohulumeni banxuse ukuthi bagxile 'kubahambi abasengozini enkulu' hhayi 'emazweni asengozini enkulu'
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
Ohulumeni bomhlaba banxuse ukuthi bayeke umqondo we-COVID-19 'amazwe asengozini enkulu' kunalokho bagxile ekutheni 'abahambi abasengozini enkulu' baphathwa kanjani emingceleni
Abantu bonke kabathelelekile futhi akufanele bonke babhalwe ukuthi 'bayingozi enkulu'
Ukuhlolwa kobungozi bomuntu ngamunye ngokuhlolwa okuphelele nokusetshenziswa kobuchwepheshe kuzokugwema ukuthekelisa leli gciwane
Ukuvumelana komhlaba wonke kuyadingeka kumamethrikhi wokuhlola ubungozi be-COVID-19
I-World Travel & Tourism Council (WTTC) ifuna ohulumeni bayeke umqondo we Covid-19 'amazwe asengozini enkulu' futhi esikhundleni salokho gxila ekutheni 'abahambi abanobungozi obukhulu' baphathwa kanjani emingceleni.
I-WTTC, emele umkhakha wangasese womhlaba wonke weTravel & Tourism, unxusa ohulumeni emhlabeni jikelele ukuthi basuse ukugxila kwabo emazweni aphelele, babheke kubahambi ngamunye.
Esikhundleni salokho, i-WTTC ithi ohulumeni emhlabeni wonke kufanele bachaze kabusha yonke indlela yabo yokuhlola ubungozi, ukuvuselela ukuhwebelana kwamabhizinisi omhlaba kanye nezokungcebeleka.
Ihlanganiswe nokuvumelana okuvamile komhlaba wonke kumamethrikhi asetshenziselwa ukuhlola ubungozi nokugxila okufana ne-laser ohlelweni lokuhlola nokufika okungabizi kakhulu, oluphelele, nolusheshayo lwabo bonke abahambi, kungavula indlela eya phambili ekubuyeni okunenjongo kohambo.
Kuzoqinisekisa futhi ukuthi yilabo kuphela abathintekile abaphoqeleka ukuba bazihlukanise, kuyilapho izihambi ezihlola ukuthi zinegciwane zingaqhubeka nokujabulela ukuhamba okuphephile ngokubheka izinqubo zenhlanzeko nokugqoka imaski.
UGloria Guevara, I-WTTC UMongameli kanye ne-CEO, uthe: “Ubungozi obususelwe emazweni wonke abusebenzi futhi abukhiqizi. Ukuchaza kabusha ubungozi kubahambi ngazinye esikhundleni salokho kuzoba ukhiye wokuvula umnyango ekubuyisweni kohambo oluphephile lwamazwe omhlaba. Sidinga ukufunda kokuhlangenwe nakho okwedlule nezinkinga ezifana no-9-11.
“Asikwazi ukuqhubeka nokubiza amazwe wonke ngokuthi 'ayingozi enkulu' okuthatha wonke umuntu ukuthi unegciwane. Ngenkathi i-UK njengamanje ibona amazinga aphezulu okutheleleka, ngokusobala akuwona wonke amaBrithani athelelekile; okufanayo kubo bonke abaseMelika, abaseSpain, noma abaseFrance.
“Iqiniso liyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Akugcini nje ukubeka isigcwagcwa esizweni sonke, kepha futhi kumisa ukuhamba nokuhamba lapho abantu abaningi abahlola ukuthi bane-negative ekuhambeni nasekufikeni bangahamba ngokuphepha ngaphandle kokuthekelisa leli gciwane.
“Kumele silibone leli qiniso futhi sichaze ubungozi bokugxila kubantu 'abasengozini enkulu'. Sikholwa ngokuqinile ukuthi sisebenzisa umbuso ophelele wokuhlola futhi ukusetshenziswa kobuchwepheshe ukuphela kwendlela esebenzayo yokubuyisa ukuvakasha kwamazwe ngokuphepha. Ngaphezu kwalokho, uhlelo oluphelele lokuhlola luzobiza kancane kunezindleko zezomnotho ezilethwe ngokuhlukaniswa ngengubo nokuvalelwa phansi.
“Lokhu kuphinda kuvinjelwe ukuthekelisa ukuthekelisa leli gciwane futhi kunikeze amandla ukuhamba ngokukhululeka kwabahambi, kuyilapho kusabhekwa izinqubo ezithuthukisiwe zenhlanzeko ezifana nokugqoka izifihla-buso nokuqhela emphakathini.
“Kumele sifunde ukuphila naleli gciwane, ngoba kuzothatha isikhathi ukuthi abantu emhlabeni jikelele bagonywe. Yingakho i-WTTC sekuyisikhathi eside ikhuthaza ukwethula ukuhlolwa okuphelele futhi okungabizi kakhulu ekuhambeni nasekufikeni kwabo bonke abahambi bamazwe aphesheya, njengendlela yokuvimbela labo abaphethe igciwane ukuthi bangalisabalalisi.
“Njengenjwayelo, kunebhalansi ebalulekile okumele yenziwe phakathi kokubekwa phambili kwezempilo yomphakathi nesidingo sokusimamisa imisebenzi yezomnotho. Futhi nokuqinisekisa ukuthi abantu baphephile futhi banempilo, sidinga futhi ukuvikela impilo yomnotho womhlaba - futhi sivuselele imisebenzi eyizigidi eziyi-174 Yezokuvakasha Nezokuvakasha ethintwe yilesi sifo esibhubhisayo. ”
Ngokwe-WTTC's 2019 Impact Report, iTravel & Tourism inikele ngama-US $ 8.9 trillion, noma u-10.3% kwi-GDP yomhlaba. Ibe nomsebenzi owodwa kweyishumi emhlabeni wonke, inika abantu abayi-10 million ngomkhakha weTravel & Tourism.